ဌေးမင်းခိုင် ● ဘယ်ကကြိုးမှာ ဘယ်လို​မျောမည်နည်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) ● အနိုင်ရအမတ်လောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ ငွေချေးလုပ်ငန်း
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● အငှားယာဉ်မောင်း သေဆုံးမှု အမှုမှန်ပေါ်အောင်စစ်ပေးရန် မိခင်က သမ္မတထံတိုင်ကြား ထား
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပြန်လာမည့်သူများအား ရခိုင်ဒေသတစ်ခုတည်းတွင် စုပြုံမထားရန် ရခိုင်လက်နှက်ကိုင်အဖွဲ့တိုက်တွန်း
ကိုသန်းလွင် ● နျူကလီးယာလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပြန်လာမည့်သူများအားထုတ်ပေးမည့် NVC ကတ်တွင် ရိုဟင်ဂျာဟု ပါမည်မဟုတ်
လွင် (ဘော်တွင်း) ● တချိန်ကချစ်လှစွာသော
သွေး (စစ်ကိုင်း) ● စစ်ပွဲကြားက အလန်ကာဒီ… တွေ
အာကာဦး - ကဖေး... ည
မော်ဆူးသစ် - ကဗျာခရီးသွား ခေါ်နူးစုမ် တေးသွားနှင့် ကခုန်စုတ်ချက်များ
ရွှေပိုးအိမ် (ပဲခူး) ● ဆိုက်ကိုးဆစ် ငါးနတ်သမီး
ကိုအောင်မှိုင်း - “ထွက်ပေါက်”ကို ဆန်းစစ်ခြင်း (ဒုတိယပိုင်း)
Wut Hmone - အပြောင်းအလဲတွေလုပ်လာမယ့် အင်န်အယ်ဒီ နဲ့ ယူအက်စ်ဒီ
ဇင်လင်း - ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ မျှော်တိုင်းဝေးမယ့် ရွှေပြည်တော်
နိုင်ငံတော်သတင်းစာပါ ဆောင်းပါးတပုဒ်က ဘာသာပြန်အကောက်အယူ အမှားတစ်ခု
မောင်ရစ် - လွှတ်တော်တံခါးတွေ ပိတ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲတံခါး တကယ်ဖွင့်ပေးမှာလား
အာဏာရူးစနစ်ကို ကျင့်သုံးသောအာဏာရှင်များနှင့် ဒီမိုကရေစီဆိုသူများ
ဇေယျာလှိုင်- အမျိုးသားရေးအရေခြုံ အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုသတိထားကြ
တူမောင်ညို - သခင်ခင်အောင်အတ္တုပ္ပတ္တိ နဲ့ ကျနော်တို့လူငယ်တွေ
တူမောင်ညို - “သမိုင်းဝင်ဖို့ - သမိုင်းတွင်” ဖို့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ဖျက်သိမ်းကြစို့
မောင်မောင်စိုး ● မြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲနှင့် စစ်ရေးအခြေအနေသုံးသပ်ချက် - အပိုင်း (၂)
ငြိမ်းချမ်းအေး - ပြန်ချိန်လည်း ဆုံးဖြတ် ခိုင်မာစေ
ငြိမ်းချမ်းအေး - နာဇီ သားကြောဖြတ် ဥပဒေအတိုင်း မြန်မာပြည်မှာဖြစ်လာတာ့မလား
Join 88,873 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month November 2018 (85) October 2018 (183) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ဌေးမင်းခိုင် ● ဘယ်ကကြိုးမှာ ဘယ်လို​မျောမည်နည်း
(မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဗျူဟာဆိုတဲ့ စကားလုံးက အရမ်းခေတ်စားသည်။ နည်းဗျူဟာ၊ မဟာဗျူဟာ၊ အဂ္ဂမဟာဗျူဟာ …. ဗျူဟာတွေ စုံလှသည်။
ဒါကြောင့်လည်း ဂိမ်းသီအိုရီလို ဗျူဟာမြောက်ဆော့ကစားရတဲ့ ဂိမ်းတွေ အရေးပါလာတာ .. ။
ဗျူဟာပိုကောင်းတဲ့ကောင်က နိုင်မယ့်ကောင် … ။
မဟာဗျူဟာ ပိုကောင်းတဲ့ကောင်က ကစားပွဲကို အသာစီးရမယ့်ကောင် … ။
မဟာဗျူဟာ ရှုထောင့်အရဆို ကိုယ်က သူများကစားကွက်ထဲမှာ ရောက်နေရင်၊ တနည်း သူများရဲ့ကစားကွက်အတိုင်း လိုက်ဆော့နေရရင် ဒါ တဖက်က မဟာဗျူဟာအရ အသာစီးရထားလို့ပဲ။ ကိုယ့်ဗျူဟာက သူ့ဗျူဟာလောက် မကောင်းလို့ပဲ။
ကိုယ့်ကစားကွက်ကို ကိုယ်ဖော်ပြီး ကစားနိုင်ပြီဆိုရင် (တဖက်က ကိုယ့်ကစားကွက်အတိုင်း လိုက်လာပြီဆိုရင်) ကိုယ့်က အသာစီးရလာလို့ပဲ။
ဒါကြောင့် NLD 2012 ကို ဝင်ပြိုင်တော့ ကျနော်တို့ မကြိုက်ပါ။ သူတို့ကစားကွက်အတိုင်း လိုက်ဆော့မယ့်အခြေအနေကို မ ကြိုက်တာ .. ။
ပြီးတော့ ပေးထားတဲ့ခွင် (ကစားနိုင်တဲ့ခွင်) ကလည်း အလွန်ကို ကျဉ်းလွန်းလှ … ။ အချုပ်အနှောင် အကန့်အသတ်က ကြီးပ … ။
ဒါပေမဲ့ NLD က အဲ့ဒီ ခွင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးကို ရအောင်ဝင်သွားသည်။ တဖက်သတ် ချမှတ်ထားသည့် ဂိမ်းစည်းမျဉ်းများနှင့် အဖက်ဖက်က အသာစီးယူထားတဲ့
ကစားပွဲကို လက်ခံပြီး ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပြီးတော့ တဖက်ရဲ့ ဗျူဟာအကွက်တွေကို တကွက်ချင်း ပြန်ဖျက်ပစ်သည်။
သေသွားတဲ့ သူတွေတောင် မဲပေးလောက်အောင် ထောက်ခံမှုရပါသည်ဆိုသည့် ၂၀၀၈ ခြေဥကို လက်မှတ်ငါးသန်းကျော်နဲ့ ဖျက်ပြသည်။ (ပြင်ရမည်ဆို
သည်ကို ထင်ရှားအောင် ပြလိုက်သည်။ တဖက်က တင်းခံတာက တပိုင်းပေါ့ … )
မှိုင်းမျိုးစုံတိုက်ပြီး NLD မဲ မရအောင် (တတ်နိုင်သမျှ လွှတ်တော်ထဲ မရောက်အောင်) လုပ်သည်။ ဒါပေမဲ့ လူထုထောက်ခံမှု ရအောင် စည်းရုံးပြီး လွှတ်တော်ကို အသာစီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ (ဂိမ်းစည်းမျဉ်းတွေ မပြောင်းနိုင်ပေမဲ့ ဂိမ်းရဲ့ချိန်ခွင်လျှာကို ပြောင်းပစ်နိုင်ခဲ့သည်)
အလွန်ဆုံး နိုင်ငံခြားရေးရာထူးလောက်သာ ပေးထားသည့်အကွက်ကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအကွက်နဲ့ ဖျက်ပစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လျှင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့် (တနည်း ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေသည့်) Myanmar Peace Center ကို ဖျက်ပစ်သည်။ ၂၁ ရာစုပင်လုံကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။
ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့ မရှင်းနိုင်သည့် (သို့မဟုတ် မရှင်းဘဲ ထားပစ်ခဲ့သည့်) ရခိုင်ကိစ္စကို ကိုဖိအာနန်တို့ ကော်မတီနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလာသည့်အထိ ရွေ့ပြသည်။
စသည် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ … ။
ဒါတွေကတော့ ကျနော့်တို့လို လူသာမန်တွေ၊ ဘေးကရပ်ကြည့်သူတွေ မြင်တွေ့ရတဲ့ အနေအထားတွေပါ။
အာဏာရပါတီ NLD ဖြေရှင်းရမယ့် အကြီးဆုံး အခက်အခဲကတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ခြေဥပြင်ရေးပါပဲ။ အဲဒီ့နှစ်ခုမှာ ဒေါ်ကြီးစုက ပိုပြီးဗျူဟာကျတယ်လို့ သူထင်တဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အရင်စကိုင်တယ်။ (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးကလည်း ၂၀၀၈ ခြေဥကို လက်မခံဘူး၊ အဲတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကနေ ခြေဥပြင်ရေးကို သွားမယ်ပေါ့)
နောက် အစိုးရတရပ်မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ … ။ ဒါကတော့ လက်ငင်းဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာ … ။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဆိုတာကလည်း စစ်တပ်နဲ့ ခရိုနီပေါင်းထားတဲ့ ခရိုစစ် စီးပွားရေးပဲ။ အနှစ် ၂၀ ကျော် အဲဒီ့ပုံစံနဲ့ run လာတာ .. ။
ဒါကို ဒေါ်ကြီးစုက စနစ်ကျတဲ့ ပြည်သူ့အခြေပြုစီးပွားရေးကို ပြောင်းတယ်။ မဟာဗျူဟာအရ ပြောင်းပစ်တာ … ။
– ငမွဲတိုင်းပြည်ဖြစ်ပေမဲ့ ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့က အစိုးရအဖွဲ့ကို အကြီးမားဆုံးဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ဒါကို NLD က အကျစ်လစ်ဆုံး ဖြစ်အောင် လျှော့ချတယ်။
– အရင်ပညာရှိမင်းတွေ သုံးခဲ့တဲ့ ငွေလိုရင် ငွေစက္ကူတွေ လှိမ့်ရိုက်တဲ့နည်းကို ပယ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်။
(ဥပမာ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ပြပြလာတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့ ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့က ငွေစက္ကူတွေ တိုးတိုးပြီး လှိမ့်ရိုက်တာ 2014-15 မှာ အရင်နှစ်ထက် နှစ်ခွဲလောက် တိုးရိုက်ပစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းကလည်း ၂၀၁၅ – ၁၆ မှာ ၂ ဆ ကျော် တက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါကို NLD အစိုးရက ငွေစက္ကူရိုက်နှိပ်တာကို လျှော့ချခဲ့တယ်။ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကို လျှော့ချနိုင် ခဲ့တယ်။ ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့တယ်)
– အရင်က မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာ ရှိတာ ထုတ်ရောင်းစားတဲ့နည်း .. ။ ရွှေ၊ သစ်၊ သတ္တု၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ .. ဘာရှိလဲ၊ ရှိတာ ထုတ်ရောင်းတာပဲ။ တနည်းအားဖြင့် အထည်ကြီးပျက်စီးပွားရှာနည်းပဲ။
အဲဒီ့သယံဇာတကျိန်စာသင့်နေတဲ့ နည်းကို ဒေါ်ကြီးစုက ပယ်တယ်။ ဥပမာ FDI အများဆုံးလာတာ စွမ်းအင်ကဏ္ဍဖြစ်ပေမဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို လုံးဝပေးမဝင်ဘူး။ (လုံဝရောင်းမစားဘူး)
အကျိုးဆက်အနေနဲ့ FDI ကျသွားတယ်။ ဝင်ငွေလျော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗျူဟာအရ မှန်တယ်။ (တိုင်းပြည်ရေရှည်အတွက် စွမ်း အင်လုံခြုံမှုဆိုတာ ထည့်ကို တွက်ရမယ့်အရာ)
– အဲဒီ့အစား အခွန်ကနေ ငွေဝင်ရအောင် ဆော်သြတယ်။ ကြိုးစားကောက်တယ်။ တခွန်းတည်းပြောရရင် နည်းမှန်လမ်းမှန် ဖြစ်အောင် ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားတယ်၊ တည်ဆောက်တယ်။
– NLD အာဏာလွှဲယူတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံခြားရန်ပုံငွေက ၂ လခွဲစာပဲ ရှိတယ်။ အဲလိုအခြေအနေမျိုးမှာ စနစ်ပြောင်းဖို့ လုပ်တာ … ။
ကိုင်း တိုတိုပဲ ပြောပါ့မယ်။
ခုလိုတွေ ရေးပြနေတာ NLD ကို ဖာနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အစိုးရတရပ်မှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိမှာပဲ။ ဒါက တပိုင်း … ။
ဒါပေမဲ့ … NLD တာဝန်ယူရတဲ့ အခြေအနေဟာ အရင်လူတွေ လုပ်ခဲ့တာကို အသာလေးဆက်ခံပြီး သွားရတဲ့ အနေအထား မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးတော့ သိစေ့ချင်တယ်။
ပြီးတော့ ဒေါ်ကြီးစုက တကယ်လုပ်နေတာက ငါးနှစ်စာ အာဏာအတွက် လူပြိန်းကြိုက်တွေ လိုက်လုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ တကယ် ကောင်းမွန်တဲ့ စနစ်တခုကို အုပ်မြစ်ချသွားချင်တာ .. ။ ဒါကြောင့် အလွန်ခက်တဲ့ အရွေ့တွေကို ကြိုးစားရွေ့နေတာ … ။ အဲဒါလေးကို သိစေ့ချင်တယ် .. ။
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ခြေဥ၊ စီးပွားရေး … အားလုံးက ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမှာ … ။
Reform တောင်မဟုတ် … Rebuild … ။ နောက် Rebuild လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း သူသွားမှာက အငြင်သာဆုံးနည်းနဲ့ … ။ အဲဒါလေးကို သိစေ့ချင်တယ် …။
အဲလိုတည်ဆောက်နေတာကိုလည်း မနာလို မရှုဆိမ့်သူတွေက အများသား .. ။ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ချင်သူတွေက အများ သား … ။ အဲဒါလေးကို သိစေ့ချင်တယ် .. ။
ဟုတ်ကဲ့ အဆုံးသတ်ပြောချင်တာကတော့ ….
ဒေါ်ကြီးစုက သူ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်း တဖက်ရဲ့ ဂိမ်းစည်းမျဉ်းတွေကို လက်ခံပြီး ဗျူဟာချင်းပြိုင်တာ ဗျူဟာအရ အသာစီးရ လာပြီလို့ ပြောရပါ့မယ် (ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ)
ဒီတော့ တဖက်က ဘာလုပ်မလဲ .. ။ ဗျူဟာချင်း မပြိုင်နိုင်ရင် ပွဲပျက်အောင် လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်။
ကျန်တာတွေတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆက်တွေးကြည့်ကြပေတော့ပေါ့ဗျာ … ။
လေထဲမှာတော့ ကျွန်နံ့တွေ သင်းလာတယ် .. ။
စုကတော့ ဘီလူးဆိုင်းကို ယမင်းကကြိုးနဲ့ ကြိုးစားကနေတုန်းပဲ … ။
အို .. ဝဋ်ကြီးလှတဲ့ မိရွှေပြည် …. ။
အသင် ဘယ်ကကြိုးမှာ ဘယ်လိုမျောမတုန်း … ။
(သတင်းအချက်အလက်တချို့ကို မြန်မာ့ရေးရာပါ ဆရာဇော်အောင်၏ ဒီမိုကရေစီအကူးပြောင်းမှုကာလ မြန်မာ့စီးပွားရေးမှ ရပါသည်။ အစိုးရကိန်းဂဏန်း အသေးစိတ်ကို www.dica.gov.mm နှင့် Myanmar Statistical Information Service တို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်)
ဌေးမင်းခိုင် ● ဝေဖန်ခြင်းအနုပညာ (သို့မဟုတ်) ဝေဖန်ရေးကို ဝေဖန်ခြင်း (0)
ဌေးမင်းခိုင် ● အိပ်မက်များဆီသို့ ပျံသန်းခြင်း (0)
ဌေးမင်းခိုင် ● ဇူတိုးပီးယားပုံပြင် (0)
ဌေးမင်းခိုင် ● စတန်းဖို့ဒ်အကျဉ်းထောင်ထဲက ပါဗလော့ရဲ့ခွေးလေးတွေ (0)
ဌေးမင်းခိုင် ● ဂိမ်းစည်းမျဉ်းများပြောင်းလဲခြင်း (0)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သူတို့အာဘော်
One Response to ဌေးမင်းခိုင် ● ဘယ်ကကြိုးမှာ ဘယ်လို​မျောမည်နည်း
Zarni Gyi on November 17, 2017 at 2:54 am
ဒျေါကွီးစု ကိုတော့ လူကွိုကျမမြားတော့ဘူး.. ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ မလှယျဘူးပွောကွတယျ.. အာဏာမရှိပဲနဲ့တောငျ တပွညျလုံးအုံးအုံးထအောငျ ဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ ဒျေါကွီးစုရဲ့ လူခဈြခငျစတေဲ့ မတ်ေတာနဲ့သစ်စာကွောငျ့ ၂၀၂၀ရှေးကောကျပှဲမှာ တပွညျလုံးပြျောကွ အုံးအုံးထ ထောကျခံကွဦးမှာ သခြောပါတယျ။ စီးပှားရေး နှေးတယျပွောပမေဲ့ အခွခေံအဆောကျဦးမြားဖွဈတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေး၊ ငှဖေောငျးဖှမှု၊ အဂတိ Corruption Index တှကေ တိုးတကျနတေယျ။ Ease of doing business ကတော့ မကောငျးဘူး ..အရေးမယူသေးလို့ပါ။ အလုပျကိုငျအခှငျ့ရေး နညျးပမေဲ့ အလုပျလုပျတဲ့ လူတှကေတော့ စားဝတျနရေေး ကောငျးမှနျကွတယျ။ မွငျ့မွတျလှတဲ့ ဒျေါကွီးစု ကို ကနြျောတော့ သသေညျ့တိုငျအောငျ သစ်စာရှိမယျဗြာ…။
သော်သော် Beauty Saloon
Genius - ဥာဏ်ကြီးရှင် ရှမ်းတောင်တန်းက ကော်ဖီ
မောင်မောင်စိုး၏ နှင်းဆီနီနီအိပ်မက်များ(၁၉၇၅-၈၀) ထွက်ပါပြီ
မောင်မောင်စိုး၏ နှင်းဆီနီနီအိပ်မက်များ(၁၉၇၅-၈၀) ထွက်ပါပြီ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာပေက ထုတ်ဝေပြီး...
ဂျူနီယာဝင်းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ့ နိုင်ငံတကာပန်းချီများ ခံစားမှုဆောင်းပါး ထွက်ပြီ
ဂျူနီယာဝင်းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ့ နိုင်ငံတကာပန်းချီများ ခံစားမှုဆောင်းပါး ထွက်ပြီ (မိုးမခစာအုပ်စင်) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) ၏ ခေတ်သစ်အတွက်ပညာရေး ထွက်ပြီ
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) ၏ ခေတ်သစ်အတွက်ပညာရေး ထွက်ပြီ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာပေက...
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ နဲ့ ကာတွန်းရေစီးကြောင်း
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ နဲ့ ကာတွန်းရေစီးကြောင်း ထွက်တော့မယ် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ...
Dr. Maung Maung Gyi on လှကျောဇော ● တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး – အပိုင်း (၁၂)